Muqdisho: Koox hubeysan oo 50 kun oo dollar ka dhacay xarun ganacsi - Caasimada Online
Home Warar Muqdisho: Koox hubeysan oo 50 kun oo dollar ka dhacay xarun ganacsi
Muqdisho: Koox hubeysan oo 50 kun oo dollar ka dhacay xarun ganacsi
Muqdisho (Caasimada Online) – Kooxo hubeysan ayaa maanta duhurkii dhac u geestay xarun ganacsi oo lagu magacaabo Sava Group, taasoo ku taalla Suuqa Wey nee Bakaaraha.
Xaruntan oo keenta dalka Caanaha gasacadeesan ayaa waxaa laga dhacay lacag caddaan ah oo kor u dhaafeysa 50,kun oo dollar.
Agaasimaha xarunta la dhacay Cali Nuur Xasan (Cali Yare) oo la hadlay VOA ayaa sheegay in kooxo ku hubeysan bastoolado ay maanta duhurkii ay xarunta xoog ku soo galeen dabadeedna ay bastoolado ku qabteen shaqaalaha xarunta oo uu ku jiray Khasnajigii xarunta.
Wuxuu sheegay kooxda dhacday xarunta in ay wateen baabuur oo markii ay dhaceen lacagta ay aadeen dhinaca Wardhiigleey sidda uu yiri iyagoo hor maray saldhigga Howlwadaag.
“Kooxda xarunteena dhacday baabuur ayey wateen markii ay lacagta qaateen, baabuur ayaan ka daba qaadanay, waxa ay sii mareen saldhigga Howlwadaag kaddib waxa ay sii adeen Wardhiigleey, ma naqaano kooxda ay yihii” ayuu yiri aggaasimaha xarunta Cali Yare.
Wuxuu kaloo sheegay in maalmahan dhowr xarumo oo ku yaalla suuqa Bakaaraha ay dhaceen kooxo ku hubeysan bastoolado.
Ugu dambeyn wuxuu tilmaamay in ay xiriir la sameeyeen maamulka degmada iyo Saldhigga degmada Howlwadaag balse wax jawaab aysan ka helin maadama ay iyga qoryaha ka qaadeen ka horre.